EX - ABSDF: ကားပါမစ်ငြိမ်းချမ်ရေး..နဲ့ …မဆိုင်တဲ့…. ABSDFပန်းဘဲဖိုတော်လှန်ရေး.ခွတ်ဒေါင်းများ…(၃).”
ကားပါမစ်ငြိမ်းချမ်ရေး..နဲ့ …မဆိုင်တဲ့…. ABSDFပန်းဘဲဖိုတော်လှန်ရေး.ခွတ်ဒေါင်းများ…(၃).”
၁၉၉ဂ..နွေနှောင်း.တနေ့ … ညနေ ၃ နာရီလောက်….စက်လှေတစီးကပ်လာတယ်….
KNLA အရာရှိတယောက်နဲ့တပ်ကြပ်ကြီးတယောက်…တက်လာတယ်။ လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ အတူ…ထိုစဉ်က စစ်ရေးချုပ်..ဗိုလ်ချုပ်ကစယ်ဒို….ရဲ့ ..တာဝန်ပေးစါအရ …နောက်တနေ့ မနက်.. တပ်မဟာ၃ဖက်ရှေ့ တန်းတနေရာကိုသွားရမယ်..
အဲ့ဒီအချိန်…နီမင်းကျနော့ဆိုင်မှာထိုင်နေတော့..သူသိသွားတယ်..ပြန်ခါနီးတော့… ပိုက်ဆံငါးဘတ်(ထိုင်းငွေ)တောင်းတယ်..တဆယ်တန်တရွက်ထုပ်ပေးတော့… မဟုတ်ဘူးတဲ့…ငါးဘတ်စေ့တစေ့ဘဲပေးပါတဲ့…ပေးလိုက်တယ်….
နောက်နေ့ မနက်အစေါကြီး..နီမင်းရောက်လာတယ်…..မနေ့ ကငါးဘတ်စေ့လေးက.
.ဒေါင်းရုပ်ကလေးဖြစ်နေတယ်.. ဆေးနီတွေဘာတွေဆိုးလို့ ..“ကျနော်ထောင်ထဲမှာရခဲ့တဲ့နည်းနဲ့ ..
.ကျောင်းသားအနေနဲ့ ပါ…ဒါကြောင့်..ဒါကို..ဦးထုတ်မှာတပ်သွားပါ..တပ်မယ်မဟုတ်လား“ ..ဆိုအတင်းပေးနေတယ်…သူထိုးပေးနေတဲ့လက်…လက်ညှိုးနဲ့ လက်မကြားမှာ …ရေဖုတွေပေါက်နေတာတွေ့ ရတယ်….စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ..ကျနော့KNLAအရာရှိ....
မျက်နှာကိုကြည့်တော့ရန်ကုန်..အင်းစိန်သားပညာတတ်ဗိုလ်ဆေးပလိုဖိုးက…. နားလည်စွာနဲ့ ပြုံးပြီးခေါင်းညိမ့်ပြတယ်။…..ကျနော်သူ့ ဒေါင်းရုပ်ကလေး လက်ထဲဆုပ်ပြီးစက်လှေပေါ်တက်ခဲ့ တယ်…ချက်ခြင်းတပ်စရာချိတ်တွေဘာတွေမပါဘူးလေ….
စက်သံဆူညံနေတဲ့ကြားကသူ့ ဒေါင်းရုပ်ကိုတပ်ဖို့ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ ပြရင်း…နီမင်းဝေးကျန်နေခဲ့တယ်…
ဇော်ထာဂိတ်ရောက်တော့ဒေါင်းရုပ်လေးကို..ရတဲ့နည်းနဲ့ တတ်ခိုင်းလိုက်တယ်…. .နောက်နေ့ ခရီးဆက်ရင်း ဇော်ထာချောင်းထဲမှာခဏနားတုံးဓါတ်ပုံတပုံရိုက်ခဲ့ တယ်… နီမင်းကိုပြရအောင်..ဒါပေမဲ့သူတွေ့ မသွားခဲ့ပါဘူး… ယနေ့ ထိ ရှိ နေဆဲ..သူ့ လက်ရာလေးကတော့…အချိန်ရဲ့ တိုက်စါးမှုကြောင့်. အရောင်လွင့်သွားပေမဲ့.. ကျနော့ရင်ထဲကရဲဘော်န်ီမင်းကတော့… ဘယ်တော့မှအရောင်လွင့်လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ…… ရှေ့ တန်းကပြန်ရောက်တော့…
Posted by lu bo at 4:32 AM